Ukuhamba | Novemba 2021
Lapho iJupiter izohamba nge-Aquarius?
Lapho iJupiter izohamba nge-Aquarius? UJupiter ubusa iSagittarius nePisces, baphakanyiswa kwiCancer futhi babhekwa njengabakhubazekile eCapricorn. Ukuhamba kweJupiter kuthathwa njengokubaluleke kakhulu ekufundweni kwezinkanyezi. NgeSonto, ngoJuni 20, 2021, ezokuthutha zikaJupiter zizobhalwa kabusha e-Aquarius kuze kube ngumhla ka-14 Septhemba 2021.21. 2021.
Kusho ukuthini iJupiter in Pisces kumaPisces?
Kusho ukuthini iJupiter in Pisces kumaPisces? ububele
Ihamba kaningi kangakanani iMercury?
Ihamba kaningi kangakanani iMercury? Izikhathi eziyi-13 ngekhulu ngalinye
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kweNeptune?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kweNeptune? ? Ukuhamba (ukuhamba) INeptune ihamba kancane, ichitha iminyaka eminingi kusibonakaliso esisodwa. Izici ezenzayo zihlala kuze kube izinyanga eziyisithupha, futhi ukuhambisa iNeptune ngendlu kungahlala iminyaka.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kukaPluto?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kukaPluto? Ukuhamba kusuka ePluto kuya kwiplanethi eyodwa noma iphuzu kungadonsa unyaka wonke, ngenxa yokuthi iPluto ibuyela emuva izinyanga ezimbalwa njalo ngonyaka futhi ijwayele ukubuyela emuva ibuye ibuye endaweni efanayo. 2019.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kwelanga?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kwelanga? Ukuhamba kwelanga kuhlala usuku olulodwa futhi kubaluleke kakhulu ekuhambeni kwesikhashana ngoba iLanga liyisikhungo samandla esimiso sethu sonozungezilanga. ILanga linamandla, lingamandla okuphila ngakho-ke livusa noma yiliphi iphuzu ku-horoscope eliyidingayo ngokuhamba. 1 2011.
Iyini inyanga ehambayo?
Iyini inyanga ehambayo? Inyanga izungeza uMhlaba njalo ezinsukwini ezingama-27.32, noma cishe kanye ngenyanga. Ngamagama ezinkanyezi, ukuhamba kwenzeka lapho inyanga noma enye indikimba yasezulwini idlula iphuzu elithile.
Yisiphi isibonakaliso esiku-Uranus manje?
Yisiphi isibonakaliso esiku-Uranus manje? Ekufundweni kwezinkanyezi, u-Uranus ungumbusi wanamuhla wesibonakaliso esingaphandle kakhulu, u-Aquarius (uSaturn, umbusi wasendulo, use-Aquarius khona manje). Njengoba i-Uranus iqhubeka nokunyakaza kwayo ngophawu lweTaurus, ingaletha ushintsho olungazelelwe nemicimbi ebekela inselelo ukuzihlonipha kwethu sonke, amanani, kanye nezimali. 2021.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kukaChiron?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba kukaChiron? UChiron (onophawu olufana nokhiye) wabekwa kwenye yezindlu zakho eziyi-12 ngenkathi uzalwa. Kodwa-ke, akukho okuhlala kumile ngakho-ke uChiron udlula ezindlini (imvamisa ehlala kusibonakaliso ngasinye cishe iminyaka emine, yize esePisces nase-Aries uhlala isikhathi eside kakhulu eminyakeni eyisikhombisa) .1. 2019.